Ekuphileni kwethu kukhona ubuchwepheshe kakhulu ewusizo kule minyaka yamuva, sibonga esingakwazi ngonanzelelo umndeni nabangane futhi bachitha amabutho ngaphansi, imi isitofu. Futhi multivarka: esisesigabeni nomkhaya wakubo, uMariya ngokuqinile senzeka yayo ekhishini. Ngosizo kule divayisi enhle, ungakwazi ukudla kwakho okuthandayo ngaphandle umzamo kakhulu. Usanda walala izithako ebhodweni, vula imodi oyifunayo futhi emva kwehora nesigamu kokuthola isidlo ukulungele futhi ezihlwabusayo kakhulu. Futhi timer, ngokuvamile, ungakwazi ukupheka konke sokufika lakini. Ngokho-ke simangaliso-isitofu ngempela. Manje sibheka iresiphi eyisisekelo: "inyama kanye amazambane multivarka". Kuyinto kulezi izithako, sivamile ukupheka umkhaya wami, ngoba inyama kwanelisa kakhulu futhi ewusizo, kanye amazambane - a kwalokho omkhulu kuso.
Cabanga indlela elula ukulungiselela le isidlo. Recipe "inyama namazambane e multivarka" lalivamile, njengoba ilungiselela kuyashesha futhi kulula. Ukuze uqale ukulungiselela zonke ezidingekayo: unfreeze 1 kg inyama (inyama yengulube, inyama yenkonyana noma inkukhu), futhi nihlanze slops amazambane, ikhasi slops garlic, anyanisi, izaqathe. Khona-ke usike anyanisi zibe cubes, izaqathe noma deda on a grater indawo noma unciphe ngesigamu futhi wenze umkhumbi. Garlic uthathe yizicucu eziningana, okuzokwenza bamane bayeke iphunga lakho. Ngo Multivarki epanini uthele amafutha kancane zemifino futhi uthele onion kanye izaqathe. Jikela ukupheka imodi futhi ushiye for imizuzu embalwa. Ngalesi sikhathi, silungiselela cubes kwenyama ugcwalise kwabo imifino kancane ethosiwe. Manje konke ndawonye, ivuse gazinga kuze ukukhanya brown golden futhi sigcwale amanzi.
Uma une ukhilimu, ungase futhi wengeze kanye amanzi, inyama ibuthakathaka kakhudlwana futhi ezithambile. Shintshela kwimodi wokukucima futhi ushiye for isigamu sehora, kuze inyama iphekwe nengxenye. Futhi, engeza ambalwa ugarliki. Lapho isikhathi Pour oqoshiwe zibe cubes naphakathi amazambane, usawoti, pepper, bese wengeza izinongo: oregano, basil, dill omisiwe, paprika, i-bay leaf noma yini ofuna ukuyisho. Vala lid futhi ushiye ngoba cishe ihora elilodwa. Ngezinye izikhathi Uphakamisa imbiza ukuhlola ukutholakala, amazambane akufanele kubiliseni ngokuphelele. Nakhu iresiphi elula. Inyama namazambane e multivarka ngomumo!
Ukuze abalandeli into entsha, okungezona ezijwayelekile kungenziwa buhlanjululwe leresiphi yakudala ezihlukahlukene imifino kanye nezinongo. Ngokwesibonelo, okufana "inyama, amazambane, iklabishi multivarka" uphelele abathandi izitsha yasebusika like isitshulu. Lapha ungakwazi ukwengeza ezinye imifino. Kulabo abasebenza ukuhlanganisa flavour ezahlukene iresiphi ofanele "inyama, amakhowe, amazambane multivarka". Kulokhu, ukhilimu sigcwalisa ngokuphelele ukunambitheka amakhowe. Njengoba inyama, ungakhetha turkey. Nge umqondo kancane ephelele ihambisana pepper, okuzokwenza kumele angezwe emva yokuwugazinga inyama. Linga izithasiselo zemifino ezahlukene kanye iresiphi "inyama namazambane e multivarka" ungalokothi usukhathele umndeni wakho, ikakhulukazi ngoba enjalo elula futhi ngokuphelele elula ukulungiselela.
A iresiphi elula iplamu compote
Recipe lavash Armenia
Indlela ukugcina ithanga? Sifunda zonke izindlela
"Spiramycin": analogs futhi yokusetshenziswa
Kuyini isicupho umshini wokuwasha nendlela ukusetha
I-Diversity Yezokuzijabulisa Nezindawo Ezitholakalayo Izinkanyezi Zase-Turkey - Yilokho Esikuthandayo Lelizwe!
Indlela ukupheka the noodle nge goulash harusame?
Garden: ukuhlela - isihluthulelo ezithela eliphezulu!
Kuyini ATC? Ukwahlukanisa izidakamizwa
Sifunda indlela okukhulelwa ingane